शिल्पाले गल्ती स्वीकार गरिन् ? ‘गल्तीवाटै सिक्ने हो’ भन्दै मागिन् माफी – Jagaran Nepal
शिल्पाले गल्ती स्वीकार गरिन् ? ‘गल्तीवाटै सिक्ने हो’ भन्दै मागिन् माफी
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आफ्नो पहिलेको जीवनमा फर्किएकी छिन्। यद्यपि यो अभिनेत्री को लागी धेरै गाह्रो भएको हुनुपर्छ। शिल्पा अहिले आफ्नो डान्स रियालिटी शो सुपर डान्स ९४ को सेटमा पहिले जस्तै काम गरीरहेकी छिन्। काम बाहेक, अभिनेत्रीले सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा पनि पुनरागमन गरेकी छिन्।
उनले इन्स्टाग्राममा एउटा किताबको पृष्ठको स्क्रिनसट सेयर गरेकी छन् । जो भाइरल भैरहेको छ। हरेक पल पूर्ण रूपमा बाँच्ने वाचा गरे पछि, अभिनेत्रीले अब गल्तीका बारेमा एक उद्धरण साझा गरिन्। मानिसहरु यो कुरालाई उनको व्यक्तिगत जीवनमा चलिरहेको उथलपुथल संग जोडेर ब्याख्या गरेका छन् ।
शिल्पाको नयाँ पोस्टमा, सोफिया लोरेनले एउटा उद्धरण साझा गरेकी छिन्, जसमा लेखिएको छ ९ गल्तीहरु एक पूरा जीवन को लागी तिर्ने बकाया को हिस्सा हो। पोस्ट मा थप पठाइएको छ, ‘हामी यहाँ र त्यहाँ केहि गल्तीहरु बिना हाम्रो जीवन रोचक बनाउन सक्दैनौं।
हामी आशा गर्छौं कि ती खतरनाक गल्तीहरु अरुलाई चो ट पुर्याउनेहरु हुनेछैनन्। चीजहरु जुन हामी आफ्नै गल्तीको रूप मा बिर्सन्छौं रोचक, चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उद्धरण अगाडि पढ्छन् ‘म गल्ती गर्न जाँदैछु ।।। म आफैंलाई माफ गर्नेछु र उनीहरुबाट सिक्नेछु। अभिनेत्रीले स्क्रिनमा लाइन गल्ती तर यो ठीक छू उद्धृत गरेकी छिन्।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, अभिनेत्रीले आफ्नो पछिल्लो जीवनमा धेरै उतार चढाव देखीसकेकी छिन्। अभिनेत्री का पति राज कुन्द्रा लाई अ श्ली ल फिल्म बनाएको आरोपमा गिरफ्तार गरियो। पुलिसले उनको घर र कार्यालयमा छा पा मा रे र केहि कागजातहरु पनि ज फ त गरे। अभिनेत्री र मोडल शर्लिन चोपडाले आरोप लगाएकी थिइन् कि राज कुन्द्राका कम्पनीका सहयोगीहरुले उनीसंग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उनको निजी मिति सार्वजनिक गरे। यसबाहेक, पूनम पाण्डेले कुन्द्रामाथि गम्भीर आरोप लगाइन् ।
चितवन – खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १ वेल्सीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पसेर क्षति पु¥याएको छ । कयर खोलाले उद्योगमा क्षति पु¥याएको हो । उद्योगका निर्देशक बिमल कालाखेतीका अनुसार त्यहाँका धरै सिलिण्डर वगाएका छन् ।
उनले भने, “यहाँका सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुगेका छन् ।”वाढीले उद्योगको संरचनामा नोक्सान पु¥याएको छ । उद्योगमा १० देखि १५ हजार सिलिण्डर रहन्छ । के कति सिलिण्डर वगायो र अरु नोक्सान कति भयो भन्ने बारेमा एकिन भइसकेको छैन ।
कतिपयलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको उनले बताए । लदरी खोलाको चैनपुर चोकबाट भित्र रहेको नयाँ पुल बाढीले वगाएको छ । लोथर र राप्ती खोलासमेत वढ्दै गएको भन्दै उनले सौराहा पनि डुवानको खतरामा रहेको जानकारी दिए ।